စစ်ကိုင်းမြို့၏ ပထမဆုံး အပန်းဖြေဥယျာဉ်နှင့် ခေတ်မီ ကစားကွင်း တည်ဆောက်မှု ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းကေ?? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်း၊ မတ် ၂ဝ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးလမ်းမကြီး ဘေးစစ်ကိုင်းမြို့နှင့် ခြောက်မိုင်ခန့်အကွာစီးတီး အုပ်စုဆွမ်းချက်ကွင်း၌ အပန်းဖြေဥယျာဉ်နှင့် ခေတ်မီ ကစားကွင်းတစ်ခုကို မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အပန်းဖြေဥယျာဉ်နှင့်ခေတ်မီ ကစားကွင်းကို စီးတီးရပ်ကွက်ကောင်း မှုတော် ဘုရားကြီးအလွန် မန္တလေး-မုံရွာကားလမ်းမကြီး ဘေးဆွမ်းချက် ကွင်းရှိမြေ ၁၅ ဒသမ ၁၃ ဧကပေါ် တွင် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောက်လုပ်ရာ ယခုအခါတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပြီးစီး နေပြီဖြစ်သည်။
”စစ်ကိုင်းမြို့အတွက် ပထမဆုံးတည်ဆောက်တဲ့ အပန်းဖြေယျာဉ်နဲ့ကစားကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကိုင်း မြို့ပေါ်က သာမကအနီးဝန်းကျင် ကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ မန္တလေး၊ မုံရွာနဲ့ရွှေဘိုအပါအဝင် တခြားရပ်နီးရပ် ဝေးမြို့ရွာများက ခရီးသွားအပန်း ဖြေနားနေလိုသူများပါ ဝင်ရောက်နားနိုင်ကစားနိုင်မယ့် နေရာကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းလွယ်လင့် တကူဝင်ရောက်နိုင်အောင် ဝင်ကြေးကိုလည်း တစ်ယောက်ကျပ်၁၅ဝဝ ပဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ မတ်လ ၃၁ ရက်ဖွင့်နိုင်အောင် လုပ်ငန်းအား လုံးကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု Happy Life Garden and Water Park တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှ ဦးအောင်စိုးမိုးက ပြောကြားသည်။
Happy Life Garden and Water Park တွင် ရေကူးကန် Water Boom ရေလွှာလျှောစီး၊ က လေးငယ်များ ဆော့ကစားနိုင်သည့် မြင်းကမ္ဘာတိုက်ကား ကလေးစီး မီးရထား၊ လှေလှော်ငန်းရုပ်စသော ကစားကွင်းနေရာများပါရှိသည့် အ ပြင် မီသားစုကာရာအိုအခန်း၊ စား သောက်ခန်းများပါဝင်ကာ သီးသန့် အပန်းဖြေမည့်သူများအတွက် အပန်း ဖြေနားနေအဆောက်အအုံငယ်များ၊ အလှပန်းပင်နှင့် အရိပ်ရပန်းပင်များ ဖြင့်ပါ သာယာလှပအောင် တည် ဆောက်ထားကြောင်း သိရသည်။
မွန်ပြည်နယ်တွင် တိုင်းရင်းသား စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဦးစီးဌာနနှင့် တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေ??
"ကာရိုက်တာကို အရမ်းရွေးရင် ကိုယ်ပဲ အလုပ်မဲ့ သွားနိုင်တယ်" ဘေဘီမောင်
ဇွန်လလောက်မှာ ‘လူအဂီတ MusicVedio Tour ‘ဆိုပြီးတော့ မြို့ခုနစ်မြို့ လောက်ကို သွားရောက်ဖျော်ဖြေဖို့ ရှ??
ဗန်းမော်မြို့နယ်တွင် တပ်မတော် စစ်ကြောင်းမှ တရားမဝင် သစ်များ တွေ့ရှိ ဖမ်းဆီး
ဟောလိဝုဒ် မင်းသား Jason Statham နှင့် မော်ဒယ် Rosie Huntington တို့ တရားဝင် လက်ထပ်လိုက်ပြီဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်
အကောင်းဆုံးပြင်သစ် လူငယ် ကစားသမားဆုကို မာရှယ်ကို ကျော်လွန်ပြီး အမ်ဘာပီ ဆွတ်ခူး
ဘဏ္ဍာရေး ၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီ(အတွင်းရေးမှူး)၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းတွင်အဖွဲ့ဝင် ဦ??
ကမ္ဘောဇသာဒီ နန်းတော်တွင် ဘုရင့်နောင် မင်းတရားကြီး၏ မိဖုရား ထိုင်းမင်းသမီး ဆုပန်ကလျာ ရုပ်တု??
Airbus A220-300 ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ပျံသန်းမိတ်ဆက်
”အိချောက မိန်းကလေးဆန်တဲ့ ကာရိုက်တာတွေကို သိပ်မကြိုက်ပါဘူး” အိချောပို